July 22, 2021 - Celegroup
July 22, 2021 cele group 0
ဘဝကို လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ ထူးခြားချက်များ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ လူတိုင်းမြတ်နိုးပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ လွတ်လပ်မှုကို မတွေ့မြင်ရတတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ မိနျးကလေးဆိုပမေယ့ျ သူတို့ရဲ့ ဘဝကို လြတ္လပ္စြာ ရှေ့ဆက်ပျံ့သန်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ဘဝကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ ဒီအချက်တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကို လာပြီး ချုပ်ချယ်တာမျိုး၊ ချုပ်ကိုင်တာမျိုးကို အရမ်းမုန်းတတ်ကြသူတွေပါ။ သူတို့လိုပဲ တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေကိုလည်း ချုပ်ချယ်ခံရတာမျိုး […]
နားလည်မှုရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေဟာ မရှိအတူ/ရှိအတူနဲ့ လောကဓံကိုရင်ဆိုင်ကြတယ် ဘဝ တစ်ခုကို အတူတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ ငွေကြေး ချမ်းသာမှု ထက် စိတ်ချမ်းသာမှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်. . .ငွေကြေးချမ်းသာမှုနောက်ကို လိုက်ရင်း ပူလောင်နေရတာထက် မရှိအတူ ရှိအတူ လက်တွဲပြီး ဘဝ ကိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရတာက ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ ဘဝ အတွက် ငွေ ကို တတ်နိုင်သလောက်ရှာပါ. . .ငွေရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဘဝကို ပျော်ရွှင် စွာဖြတ်သန်းပါ. […]
ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည်အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍ တရားအားထုတ်သော နေရာဖြစ်ပါတယ် . မြောက်ဒဂုံ၊ (၄၈)ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ယာ ဘေးထဲရှိ ယောက်ကော်အဖေကြီး တည်ထားသော ဇေယျမုနိဘုရားကြီးထဲမှာ ကိန်းဝပ် စံပယ်လျက်ရှိပါတယ် သွားရောက် ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေ မူရင် […]
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်(၅)မျိုး…
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်(၅)မျိုး လူတစ်ယောက်ဟာ သစ္စာရှိမယ့်သူလား၊ သစ္စာမရှိလိမ်ညာတတ်တဲ့သူလားဆိုတာ သူ့ရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သစ္စာမရှိတဲ့သူအများစုမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေကို သိသိသာသာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ့်ဖို့ပဲကြည့်တတ်တဲ့အတ္တသမားဖြစ်နေခြင်း သစ္စာမရှိတဲ့သူအများစုဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်အတွက်ပဲကြည့်တတ်ပြီး သူများဘက်ကိုလုံးဝထည့်မစဉ်းစားတတ်တဲ့ အတ္တကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖို့ပဲကြည့်လွန်းပြီး သူများဘက်ကိုမကြည့်ပေး၊မတွေးပေးတတ်တော့ သစ္စာဖောက်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတော့ပါဘူး။ (၂) ကိုယ့်ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်ကို မလေးစားတတ်ခြင်း ချစ်သူတွေ၊လက်တွဲဖော်တွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားတတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ကို […]
သင့်အသက်အရွယ်နဲ့အတူ လိုက်ပါပြောင်းလဲသင့်တဲ့လူမှုဘဝပုံစံ(LIFE STYLE)
သင့်အသက်အရွယ်နဲ့အတူ လိုက်ပါပြောင်းလဲသင့်တဲ့လူမှုဘဝပုံစံ(life style) မည်သူမဆို အသက်အရွယ်ဆိုတာ ရပ်တန့်မနေပါဘူး။ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကြီးပြင်းလာခြင်းသာ ဖြစ်တာမို့ သင် ထိုအသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ အနေအထိုင်နဲ့အပြုအမူများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ရှိမှသာ အသက်ကြီးခြင်းမှာ ပျော်စရာကောင်းပြီး အမြဲတမ်း နုပျိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိလာပြီး သစ်လွင်လှပတဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အမူအကျင့် ကောင်းလေးတွေဟာ သင့်ကို အထူးအထောက်အကူ ပြုစေမှာမို့ ရှာဖွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁ […]
သတိထားရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုချပြခြင်း သေဆုံးပြီးသူ ကိုယ်ထဲကပိုးက လေထဲကိုမထွက်တော့ပါ။ သူ့ခန္ဓာကို ထိကိုင်ရာကနေပဲကူးပါတယ်..အနားမှာသွားရပ်နေလို့ မကူးပါ. တကယ်တော့ ပိုအရေးကြီးတာက နာရေးမိသားစုပါ။ မိသားစုဝင်များမှာ ကူးစက်ခံတားရပြီးဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ #သူတို့နဲ့ အနီးကပ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ လေထဲကနေ လွင့်ပျံလာတဲ့ အမှုန်ထဲက ပိုးတွေက ပိုပြီး ကူးစက်လွယ်ပါတယ်••• အသက်ရှင်နေသူက အသက်ရှုထုတ်တိုင်း၊ စကားပြောတိုင်းပိုးတွေလေထဲကိုပျံ့လွင့်စေနိုင်ပြီး သေသွားပြီးသူတွေကတော့ အသက် မရှူတော့လို့ ပိုးတွေကိုလေထဲကိုမပျံ့စေတော့ပါ•• ထိကိုင်မှုကသာကူးပါတယ်။နာရေးမိသားစုများ Mask တပ်ပါ.. နာရေးကိစ္စလူနည်းနိုင်သမျှနည်းနည်းနဲ့ ဆောင်ရွက် ကြပါ… Credit ### […]
ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဆန္ဒကိုဘဝနဲ့ ထိန်းနိုင်ရမယ်
တစ်ခါကသားအဖနှစ်ယောက် အလွန်စည်ကားသော စျေးကြီးတစ်စျေးအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါအသက်၁၀နှစ်ခန့်ရှိသားငယ်မှ အဖေဖြစ်သူအား ဗိုက်ဆာတယ်အဖေရှေ့မှာယုန်ကင်တွေရောင်းနေတယ်သားကိုဝယ်ကျွေးပါတဲ့ သား…တစ်ကောင်ဘယ်လောက်လဲ သွားမေးလိုက်လို့အဖေကပြောလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်သူလည်း ယုန်ကင်သည်ကိုသွားမေးတော့ ယုန်တစ်ကောင်ငါးကျပ်လို့စျေးသည်ကပြန်ပြောပါတယ် သားဖြစ်သူလည်း အဖေတစ်ကောင်ငါးကျပ်တဲ့ဗျ သားကိုဝယ်ကျွေးနော်ဆိုတော့ အဖေကသူ၏လက်ထဲကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ တစ်ဆယ်တန်လေးတစ်ရွက်ကိုကြည့်ရင်း အံကိုကြိတ်ပြီး သားဖြစ်သူကိုပြောလိုက်ပါတယ် ယုန်တစ်ကောင်ကိုငါးကျပ်တဲ့လား ?မစားပါနဲ့အုံးသားရယ်… လာသွားရအောင် သား… ဗိုက်ဆာနေရင် အဖေတခြားဟာ ဝယ်ကျွေးပါ့မယ်လို့ပြောပြီး သားဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး အဲ့ဒီနေရာကနေ ထွက်လာခဲ့တယ် ပြီးတော့မှ ဘိန်းမုန့်၂ခုတစ်ကျပ်ဖိုး သားဖြစ်သူဗိုက်ပြည့်စေဖို့ ဝယ်ကျွေးခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့နောင်၁၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအဲဒီစျေးကြီးထဲကိုပဲ သားအဖနှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသားဖြစ်သူက […]
ဒီနည်းနဲ့ကုရင် အောက်ဆီဂျင်မလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေနဲ့ကုလိုက်တာအောက်ဆီဂျင် ၉၉ ထိပြန်တက်လာပါပြီ မနေ့က၆ဝအောက်ကျလို့အောက်ဆီဂျင်အိုးမရရင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ဆရာကဒီနေ့ဆေးခန်းသွားပြတော့ အမဘာတွေများလုပ်လိုက်တာလဲ မသေတော့ဘူးအသက်ပြင်းလိုက်တာလို့တောင်ပြောယူရတယ် ဒါကတော့အမေအောက်ဆီဂျင်ကျနေတုန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်တွင်းနည်းတွေပါ ၁။ ဆေးခန်းကပြန်လာတော့လူနာကကြောက်တာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးအသက်တောင်သိပ်မရှူနိုင်တော့ပါဘူး။ ခေါင်းအောက်၊ရင်ဘတ်အောက်၊ဗိုက်အောက်ခြေထောက်အောက်မှာ(၁၊၂၊၂၊၁)ပုံစံခေါင်းအုံးထားပြီးမှောက်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ရေနွေးအိပ်ကိုဘယ်ဘက်ကျောမှာကပ်ပေးတယ်။ ၂။ကြက်ဥ၊သံပုရာသီး၊ပျားရည်ကိုရောဖျော်ပြီး ဝင် အောင်တိုက်ပါတယ်။ ၃။ဂွေးတောက်ရွက်၊ပင်စိမ်းကိုရေနွေးပူပူထဲထည့်ပြီးရှူနိုင်သလောက်ရှူခိုင်းပါတယ်။ ၄။ကြက်ပြုတ်ရည်တိုက်တယ်(အစာမဝါးနိုင်လို့)ဆန်ပြုတ်တိုက်ပြီးဆေးတိုက်ပါတယ်။ အမေအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာအသံတွေမဆူညံအောင်ဂရုစိုက်တယ် ။အိပ်မောကျတဲ့ထိစောင့်ကြည့်တယ် ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးဖို့ပြောတယ်။ တရားဖွင့်ပေးတယ်။ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ် ။ခုတော့အခက်အခဲဆုံးအချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ စဖျားတာကနေအခုထိ၁ဝရက်ရှိပြီဆိုတော့နောက်၄ရက်ဆက်စောင့်ကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်။အခုအမေကလန်းလန်းဆန်းဆန်းပါပဲအစားလဲစားနိုင်ပါပြီ။ အမေကစိတ်ပျော့တဲ့သူပါစိတ်ဓာတ်ကျလွယ်သူပါရောဂါအခံလဲရှိပါတယ်။စိတ်သာမာရင်အားလုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ မနေ့ကအောက်ဆီဂျင်ဝိုင်းရှာပေးတဲ့ရှာဖို့ကူညီတဲ့သူအားလုံးကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မှတ်ချက်။ ။ အရေးကြုံရင်အောက်ဆီဂျင်လိုက်ရှာနေလို့ပဲမရပါဘူး။ဖုန်းအလုံးပေါင်း၁၀၀ နီးပါးလောက်ခေါ်ပေမယ့်မရခဲ့ပါဘူး။ အမေ့အသက်အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကိုပဲအားကိုးနေရင် မနေ့ကအမေအသက်မရှင်နိုင်လောက်ပါဘူး။အဲ့တာကြောင့်အရေးကြုံရင်လုပ်လို့ရမယ့်အရေးပေါ်နည်းလေးတွေမှတ်ထားပါ။ လူနာကိုပက်လက်မထားဖို့လုံးဝသတိပြုပါ။ Credit, ဒီနည္းနဲ႔ကုရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္မလိုေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ […]